Flightgbọ elu si Guatemala City na Mérida na ụgbọ elu TAG ugbu a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Flightgbọ elu si Guatemala City na Mérida na ụgbọ elu TAG ugbu a
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Guatemala • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Flight si Guatemala City na Mérida na ụgbọ elu TAG ugbu a
Ụgbọ elu ozugbo ga-amalite ọrụ na nkeji mbụ nke 2022 yana ugboro anọ kwa izu yana ọnụego asọmpi mara mma.
N'ime usoro nke mbipụta 45 nke Tianguis Turístico México 2021, ụlọ ọrụ Guatemalan TAG Airlines kwupụtara ụzọ ikuku ọhụrụ ya ga-ejikọta. Guatemala City ya na Mérida, Yucatán, n'ụgbọ elu ozugbo nke ga-amalite ọrụ na nkeji mbụ nke 2022 yana ugboro anọ kwa izu yana ọnụego asọmpi mara mma.
"Anyị nwere ekele maka ntụkwasị obi nke ndị ọchịchị steeti Yucatan, na TAG Airlines nwere ebumnuche nke ịga n'ihu n'ịkwalite njikọ ikuku na steeti niile mejupụtara mpaghara Maya World, na Yucatan bụ, n'enweghị mgbagha, atụmatụ. ebe aga, "Julio Gamero, CEO nke Ụgbọ elu TAG.
Na ụlọ ọrụ nke Marcela Toriello, Onye isi oche nke Board of Directors of Ụgbọ elu TAGGamero kwuru, sị: "Taa, anyị ga-akwado mkpado nke ụlọ ọrụ ụgbọ elu iji kwalite mmepe nke ụlọ ọrụ ụgbọ elu na njem nlegharị anya, nke bụ engines abụọ dị mkpa maka ọganihu akụ na ụba nke obodo anyị, ebe anyị na-ekele onyeisi obodo Renan Barrera maka ọrụ ya dị ka onye nhazi nke ọhụrụ a. ụzọ."
Gọvanọ nke steeti Yucatan, Mauricio Vila, mere ememe mmalite nke ọrụ nke na-abịa Ụgbọ elu TAG na steeti ahụ, ma kwuo na ọrụ nkwonkwo ga-eme ka Yucatan na Guatemala na-eme nke ọma.
O kwusiri ike na ụzọ ụgbọ elu ọhụrụ a ga-enye aka n'ịkwalite njikọ nke ịdị n'otu dị n'etiti mmadụ abụọ ahụ, yana mmepe akụ na ụba nke mpaghara Mayan World.
N'aka nke ya, onye isi obodo Mérida, Renan Barrera Concha, kwuru na mbata nke TAG Airlines na isi obodo Yucatecan bụ otu n'ime ozi ọma na mpaghara ahụ tụrụ anya, karịsịa n'ime usoro nke Tianguis Turístico Mérida 2021. O kwuru na ikuku ahụ. Njikọta ga-agba ume na mmepe nke njem nlegharị anya na azụmahịa.
Yucatan na-enye ihe ntụrụndụ na onye njem azụmahịa dị mkpa ebe nkiri, n'etiti nke obodo Merida, mpaghara ihe ochie nke Chichen Itza (a na-ewere ya dị ka otu n'ime ihe ebube nke ụwa), Valladolid, Izamal, na mgbakwunye na nnukwu akụ na ụba omenala, eke na gastronomic. . Ka ọ dị ugbu a, Guatemala, dị ka obi nke ụwa Mayan, na-enye ụdị dịgasị iche iche nke omenala na azụmahịa, ma na-anọchite anya ọnụ ụzọ ámá nke Central America.
Ụgbọ elu TAG bụ ụlọ ọrụ Guatemalan 100% nke maka afọ 50 kwadoro nkwenye siri ike na njikọta ikuku na mmepe.
Ọ na-arụ ụgbọ elu 27 kwa ụbọchị na Guatemala, Honduras, El Salvador, Belize na Mexico, yana ụgbọ elu ọgbara ọhụrụ karịrị ụgbọ elu 20.
Ụgbọ elu TAG malitere ọrụ n'oge na-adịbeghị anya na Mexico, na ụzọ ụgbọ elu na-ejikọta Guatemala City na Cancun na Tapachula, yana ụzọ dị n'etiti Cancun na obodo Flores, na mpaghara Peén.